Jeremiya 9 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kunetseka kwaJeremiya (1-3a)
Jehovha anoita kuti vaJudha vazvidavirire (3b-16)
Kuchema Judha (17-22)
Kuzvirumbidza pamusoro paJehovha (23-26)
9 Kudai hangu musoro wangu waiva mvura,Maziso angu ari chisipiti chemisodzi!+ Ndaizochema siku nesikati,Ndichichema vakaurayiwa pavanhu vangu. 2 Kudai hangu ndaiva nenzvimbo inogarwa nevafambi murenje! Ndaizosiya vanhu vangu, ndoenda zvangu,Nekuti vese zvavo imhombwe,+Chikwata chevanyengeri. 3 Vanokunga rurimi rwavo seuta;Nhema ndidzo dzakazara munyika yacho, kwete kutendeka.+ “Vanobva pane zvakaipa vachienda pane zvakaipa,Uye havanditeereri,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 4 “Munhu wese ngachenjerere muvakidzani wake,Uye musavimba kunyange nehama yenyu. Nekuti hama yese mutengesi,+Uye muvakidzani wese anosvibisa mazita evamwe.+ 5 Mumwe nemumwe anobiridzira muvakidzani wake,Uye hapana anotaura chokwadi. Vakadzidzisa rurimi rwavo kureva nhema.+ Vanozvinetesa nekuita zvakaipa. 6 Muri kugara pakati pevanyengeri. Vakaramba kundiziva neunyengeri hwavo,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 7 Saka zvanzi naJehovha wemauto: “Ndichavanatsa uye ndichavaedza,+Nekuti chii chimwe chandingaita nemwanasikana wevanhu vangu? 8 Rurimi rwavo museve unouraya; runotaura zvekunyengera. Nemuromo wake, munhu anotaura zverugare kumuvakidzani wake,Asi mumwoyo make anenge achihwandira.” 9 “Handingaiti kuti vazvidavirire pazvinhu izvi here?” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “Ndingarega* kutsiva rudzi rwakadai here?+ 10 Ndichachema makomo uye ndichaungudzaUye ndichaimba rwiyo rwekushungurudzika pamusoro pemafuro* erenje,Nekuti akapiswa zvekuti hapana munhu anopfuura namo,Uye kuchema kwezvipfuwo hakusi kunzwika. Shiri dzedenga nemhuka zvatiza; zvaenda.+ 11 Ndichaita kuti Jerusarema rive mirwi yematombo,+ nzvimbo inogara hunguhwe,*+Uye ndichaita kuti maguta eJudha ave matongo, asina anogaramo.+ 12 Ndiani akachenjera zvekuti anokwanisa kunzwisisa zvinhu izvi? Muromo waJehovha wataura naani kuti audzewo vamwe? Nei nyika yaparara? Nei yabvuraudzwa serenje,Zvekuti hapana ari kupfuura namo?” 13 Jehovha akapindura achiti: “Nekuti vakaramba mutemo* wangu wandakadzika pamberi pavo, uye nekuti havana kuutevera, vachirega kuteerera inzwi rangu. 14 Asi vakaomesa misoro vakatevera mwoyo yavo,+ uye vakatevera mifananidzo yaBhaari, sezvavakanga vadzidziswa nemadzibaba avo kuti vaite.+ 15 Saka zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Ndiri kuita kuti vanhu ava vadye kamuti kanovava, uye ndichavanwisa mvura ine muchetura.+ 16 Ndichaita kuti vapararire pakati pemarudzi avasina kuziva, ivo kana madzibaba avo,+ uye ndichatuma bakatwa kuti rivatevere kusvikira ndavaparadza.’+ 17 Zvanzi naJehovha wemauto,‘Ratidzai kuti munonzwisisa. Shevedzai vakadzi vanoimba nziyo dzekushungurudzika,*+Uye daidzai vakadzi vane unyanzvi kuti vauye, 18 Kuti vakurumidze kuuya kuzotichema,Kuti maziso edu ayerere misodziUye maziso edu achururuke mvura.+ 19 Nekuti inzwi rekuchema ranzwika muZiyoni richiti:+ “Chokwadi taparadzwa! Tiri kunyara zvisingaiti! Nekuti tasiya nyika yacho, uye vapwanya misha yedu.”+ 20 Inzwai shoko raJehovha, imi vakadzi. Nzeve dzenyu ngadziteerere shoko remuromo wake. Dzidzisai vanasikana venyu rwiyo urwu rwekuchema,Uye dzidzisanai rwiyo urwu rwekushungurudzika.+ 21 Nekuti rufu rwauya nepamahwindo edu;Rwapinda mushongwe dzedu dzakavakwa zvakasimbaKuti rubvise vana mumigwagwaUye majaya mumisika.’+ 22 Iti, ‘Zvanzi naJehovha: “Zvitunha zvevanhu zvichawira pasi semupfudze mumunda,Semutsetse wezvirimwa zvichangobva kuchekwa nemukohwi,Pasina anozviunganidza.”’”+ 23 Zvanzi naJehovha: “Munhu akachenjera ngaarege kuzvirumbidza neuchenjeri hwake;+Munhu ane simba ngaarege kuzvirumbidza nesimba rake;Uye mupfumi ngaarege kuzvirumbidza neupfumi hwake.”+ 24 “Asi anozvirumbidza ngaazvirumbidze neizvi: Kuti anonzwisisa nezvangu uye ane ruzivo pamusoro pangu,+Kuti ndini Jehovha, iye anoratidza rudo rusingachinji, anotonga zvakanaka uye anoita zvakarurama panyika,+Nekuti ndinofarira zvinhu izvi,”+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 25 “Inzwai! Mazuva achasvika,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “andichaita kuti munhu wese akachecheudzwa asi asina kuchecheudzwa azvidavirire,+ 26 pamwe chete neIjipiti+ neJudha+ neEdhomu+ nevaAmoni+ neMoabhi+ nevanhu vese vane bvudzi repamberi penzeve rakadimburirwa vari kugara murenje;+ nekuti marudzi ese haana kuchecheudzwa, uye imba yese yaIsraeri ine mwoyo isina kuchecheudzwa.”+
^ Kana kuti “rwekuchema mafuro.”
^ Kana kuti “dzekuchema.”